Wararka Shirka Afisyooni, Ajendaha, Yaa Yimid, Yaase Qaadacay? | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA Wararka Shirka Afisyooni, Ajendaha, Yaa Yimid, Yaase Qaadacay?
Wararka Shirka Afisyooni, Ajendaha, Yaa Yimid, Yaase Qaadacay?
Maxaa Ka Socda Teendhada Afisyooni!
Waxaa jira ajendeyaal is khilaaf oo kasoo baxaya shirka iyada oo aan la ogeyn kasoo qeyb galka Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubblanad iyo madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo dooddda ugu weyn ka qabay arrimaha ajendaha shirka, wararka qaarna ay sheegaan in aaney maanta iman-doonin!
Maamu goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, oo taageero ka heysta madasha badbaadada qaran ayaa qaba in ajendaha lagu daro (1). Amniga doorashada iyo cidda sugeysa, (2). In wax laga badalo booliiska, (3). In shaqada laga joojiyo taliyeyaal ku lug lahaa weerarka mucaaradka ee 19 Febraayo, (4). In Farmaajo uu saxiixo warqad uu ku laalayo awoodihiisa, (5). In xukuumadda ay sii wado arrimaha doorashada, (6). In la dhiso guddi qaran oo muddada kala guurka maamula dalka oo xukuumadda iyo guddoonka ay baarlamaanka ay DF u matali doonaan iyo arrimo kale.